Thu, Oct 01, 2020 | 01:10:26 NST
​सैनिक विमान अल्जेरियामा दुर्घटना, धेरैको ज्यान गएको आशंका
चैत २८ – अल्जेरियामा सैनिक विमान दुर्घटना भएको छ ।
​फेसबुकको गोप्य जानकारी चोरी भएकोमा जुकरबर्गले मागे माफी
चेत २८ – फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले फेसबुकको गोप्य जानकारी चोरी भएको विषयमा अमेरिकी सिनेटरसँग माफी मागेका छन् ।
चैत २८ – अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ल्याटिन अमेरिकाको भ्रमण रद्द गरेका छन् ।
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा २७ को मृत्यु
काठमाडौं, चैत २७ – भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको छ ।
​चार महिनाको छावाले इनार भित्रैबाट गुहार मागेपछि...
चैत २६ – कहिलेकाहीँ कुनै तस्बिर हेर्दै हृदयविदारक लाग्छन् । त्यस्तै तस्बिर अहिले भाइरल भएको छ । प्यास मेटाउन इनारमा पानी देखेर लम्किएको हात्तीको बच्चा(छावा) इनारभित्रै खसेपछिको तस्बिरले कसको मन नछोला र ?
चैत २६ – सिरियाको सैन्य एयरपोर्टमा मिसाइल आक्रमण भएको छ । सिरियाली सञ्चार माध्यले सेनाको विमानस्थलमा आक्रमण भएको जनाएका छन् ।
चैत २५ – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवास अगाडि आइतबार प्रदर्शन गर्न लागेका केही सांसदलाई प्रहरीले हटाएको छ ।
​अमेरिकामा ट्रम्प टावरमा आगलागी
चैत २५ – न्यूयोर्कमा रहेको र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घर र कार्यालय रहेको भवन ट्रम्प टावरको पचासौं तल्लामा आगो लागेको छ ।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट ह्याक, चिनियाँ ह्याकरको संलग्नताको आशंका
चैत २३ – भारतीय रक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट एमओडी डट जीओभी डट आईएन शुक्रबार ह्याक भएको छ ।
दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति हेलाई २४ वर्षको जेल सजाय
चैत २३ – दक्षिण कोरियाकी पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्युन हेलाई २४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
दुई कोरियाका उच्चअधिकारीको बैठक हुने
चैत २० – उत्तर र दक्षिण कोरियाका उच्च अधिकारीहरुको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । यही महिनाको अन्त्यतिर हुन लागेको दुई कोरियाको शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि उनीहरुको बैठक हुन लागेको हो ।
फेसबुकद्वारा ९ करोड नागरिकको जानकारीबारे गलत साझेदारी
चैत २२ – सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले झण्डै ९ करोड नागरिकको जानकारी राजनीतिक सल्लाह दिने कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकासँग गलत तरिकाले साझेदारी गरेको पाइएको छ ।
​बाख्रालाई बचाउन बाघसँग घम्साघम्सी, त्यसपछि लिइन् सेल्फी
चैत २१ – बाघको पञ्जाबाट फुत्केर आएकी एक युवती घरमा छिर्नेबित्तिकै के गरिन् होला ? बाघको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएकी ती युवतीको शरीर रगताम्मे थियो । तर उनले घरभित्र छिर्नेबित्तिकै आफ्नो मोबाइल निकालेर आफू र आफ्नी आमाको सेल्फी लिइन् ।
झडपमा १८ तालिवान मारिए
चैत २१ – अफगानिस्तानमा मङलबार भएको झडपमा कम्तीमा १८ तालिवान आतंककारी मारिनुका साथै अन्य १३ जना घाइते भएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यूट्युबको मुख्यालयमा गोली चल्यो
चैत २१ – अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्नियामा रहेको यूट्यूबको मुख्यालयमा गोली चलेको छ । एक महिला बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा तीनजना घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ ।
​३ वर्ष हुँदा हराएकी छोरी २४ वर्षको खोजपछि भेटिइन
चैत २० – चीनको दक्षिण पश्चिममा रहेकाे च्येङ्डू शहरमा एक दम्पतीले सबैभन्दा ठूलो उपहार पाएका छन् ।
चैत १९ – रंगभेद विरोधी दक्षिण अफ्रिकी नेता विन्नी मण्डेलाको ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
​चीनले दियो अमेरिकालाई ‘जस्तालाई त्यस्तै’ जवाफ
चैत १९ – चीनले आफ्ना सामानको सीमा शुल्क बढाउने अमेरिकी निर्णयलाई उस्तै जवाफ दिएको छ ।
​काश्मिरमा सुरक्षाकर्मीको कारवाहीमा ११ जना विद्रोही मारिए
चैत १९ – भारत प्रशासित काश्मिरमा सुरक्षाकर्मीको कारवाही अभियानमा ११ जना विद्रोही लडाकु मारिएका छन् ।
दक्षिण काश्मिरमा झडप, तीन सैनिक तथा ११ विद्रोहीको मृत्यु
चैत १८ – दक्षिण काश्मिरको विभिन्न तीन स्थानमा आतङ्कवादी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छुट्टाछुट्टै समूहमाथि सेनाले चलाएको कारबाहीमा कम्तिमा ११ जना आतङ्कवादी लडाकूको ज्यान गएको छ ।
अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु, उत्तर कोरियासँगको वार्ता भाँडिने चिन्ता
चैत १८ – दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा आइतबार सुरु भएको समाचार छ ।
​दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा हराएको पानी जहाज श्रीलङ्कामा भेटियो
चैत १८ – दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानको हवाइ आक्रमणको निशानामा परेको बेलायती पानी जहाज ७५ वर्षपछि भेटिएको छ ।
चैत १८ – रुसको विदेश मन्त्रालयले २३ देशका कूटनीतिज्ञलाई आफ्नो देशबाट निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकाकाे भिसा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ ? अब बुझाउनु पर्नेछ पासपाेर्टसँगै फेसबुक, ट्विटरकाे पनि विवरण
राष्ट्रसंघबाट प्योङयाङलाई तोकेर अहिलेसम्मकै ठूलो दण्ड
चैत १७ – संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध छल्न उत्तर कोरियालाई सघाएको आरोपमा २७ वटा पानीजहाज, २१ वटा पानीजहाज कम्पनी र एक व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
भौतिकशास्त्री स्टीफन हकिङ्गको अन्तिम संस्कार गरिँदै
चैत १७ – भौतिकशास्त्री स्टीफन हकिङ्गको अन्तिम संस्कार शनिबार गरिँदैछ ।
​टाउको छुट्टिएर पनि १८ महिनासम्म कसरी बाँच्यो यो कुखुरा ?
चैत १६ – अमेरिकामा ७३ वर्ष पहिले एक जना किसानले एउटा कुखुराको टाउको काटेका थिए । तर त्यो कुखुरा मरेन, १८ महिनासम्म जीवित नै रह्यो ।
आफ्ना ६० कूटनीतिज्ञलाई रुसले हटाएपछि अमेरिका रुष्ट
चैत १६ – अमेरिकाले आफ्ना ६० कूटनीतिज्ञलाई रुसी सरकारले आधारहीन ढंगले देश निकाला गरेको बताएको छ ।
पपुवान्यूगिनीमा ६ दशमलव ९ रेक्टरस्केलको शक्तिशाली भूकम्प
चैत १६ – पपुवान्यूगिनीमा ६ दशमलव ९ रेक्टरस्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पका कारण इन्गा राज्यमा कम्तिमा पनि एक सय जनाको ज्यान गएको छ ।
​ट्रम्प, पुटिन र जिनपिङलाई टक्कर दिँदै मोदी
चैत १५ – टाइम म्यागेजिनको सय जना प्रभावशाली व्यक्ति सूचीको दाबेदारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि अग्रपंक्तिमा रहनु भएको छ ।
भेनेजुयलाको कारागारमा झडपपछि आगलागी : ६८ जनाको मृत्यु
चैत १५ – भेनेजुएलाको भ्यालेन्सिया शहरमा रहेको एक कारागार र त्यससँगैको प्रहरी चौकीमा थुनुवा र सुरक्षाकर्मीबीचको झडप र त्यसपछिको आगलागीमा ६८ जनाको ज्यान गएको छ ।
किन गए किम जोङ अचानक चीन भ्रमणमा !
चैत १५ – उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन अचानक चीन भ्रमण जानुले विश्वलाई नै हैरान बनाएको छ । उत्तर कोरियाको चीनसँग कति गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा किमको यो भ्रमणबाट सावित हुन्छ ।
६ वर्षपछि आफ्नो देश फर्किइन् मलाला युसुफजाई
चैत १५ - महिला शिक्षा तथा बालअधिकारकर्मी मलाला युसुफजाई आफ्नो देश पाकिस्तान फर्कनुभएको छ ।